Abanye abashone engozini yesitimela eNdiya | News24
Abanye abashone engozini yesitimela eNdiya
New Delhi – Isikhulu kuhulumeni waseNdiya, sithi kwenzeke ingozi yesitimela enhla nesifunda i-Uttar Pradesh, kwashona abantu abangu-13 kwalimala abathathu.
Ngokusho kukaJai Chand Pandey, ingozi yenzeke ezintathakusa ngoLwesihlanu, ngesikhathi izisulu zibuyela emakhaya zikade zisemcimbini edolobheni iGorakhpur.
UPandey uthi abathathu abalimele bangeniswe esibedlela, bonke bebesesimweni esibucayi.
Izingozi zezitimila ziyinsakavukela eNdiya, lezi zithuthi zithwala abantu abangaba ngu-20 million ngosuku.
Kunemigwaqo ehamba izimoto ekunqamuka kuyo izitimela, le migwaqo ayimakiwe ngendlela, nokwenza kuvame izingozi.